Nhau - Simbi Raw Zvinhu Mutengo Ramba Uchiwedzera.
Kubva kutanga kwegore rino, mbishi zvinhu zvakaita sehuni, chipanji, zvemakemikari zvekunamira, simbi dzisingasimbi, uye kunyange makatoni ave achikwira, uye mitengo yezvimwe zvikamu yakatowedzera zvakapetwa. Semuenzaniso, simbi-isina simbi yakakwira neinenge 50%, uye yakapfava furo poly-ether, yakakosha mbishi zvinhu zvechipanji furo, yakwira ne126.74% mumwedzi mina yapfuura.
PaFocus, simbi mbishi zvinhu zvave kuramba zvichikwira kubva munaNdira, 2021. Mazuva ano, mushure meMutambo weChirimo, ichiri mukuita kwekukura.
Zvinhu zvikuru zvakaita semabhero.
● Kuburitswa kwesimbi muna 2020 kwakaderera pane zvakaburitswa muna 2019
● Ministry of Ecology and Environment: Inoshingairira kusimudzira simbi nesimbi, marasha nemamwe maindasitiri kugadzirisa huwandu hwakawanda
● Indasitiri yemuchina inoda musika ichaenderera ichinaya, uye nharaunda yekushandisa iri kutarisirwa kuramba ichivandudza.
Ongororo iyi inotenda kuti kuwedzerwa kwemitengo yezvinhu zvakasvibirira kuri kune rimwe divi kwakakanganiswa nedenda repasi rose korona yemabayo, uye kune rimwe divi ndiko kutarisirwa kwekatalisisi yekudzora hupfumi hwepasirese mushure mejekiseni idzva rekorona raparurwa mune ramangwana. Mukupindura kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvisina kubikwa, midziyo yemumba nemamwe makambani vazivisa kukwira kwemitengo.
Musika wesimbi wapinda mukugadzirisa kushandurwa. Isu tinofungidzira kuti maonero emusika acharamba achiwedzera kumusoro uye achazogadziriswa zvishoma munguva pfupi iri kutevera, akamirira kuti kudiwa chaiko kutange.
Mari yemari inochengetera mbishi zvinhu uye kufungidzira pamusoro pezvinhu mumusika weramangwana ndizvo zvikonzero zvekukwira kwazvino kwemitengo yezvinhu. Aya maitiro anoenderera mberi kweanenge makore maviri, uye kumanikidza kweRMB kudzikisira kuchawedzera. Hupfumi hwepasirese hauna kudzoka munzvimbo ine husimbe hwekuda mune hupfumi chaihwo.